I-Chalet entle ePlayas de Muro - I-Airbnb
I-Chalet entle ePlayas de Muro
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguAina
Indlu entle ecandiweyo eyi-350m ukusuka kolunye lolona lwandle luhle eMallorca, inikezelwe njengolona lwandle lubalaseleyo lweshumi eYurophu ngokutsho kweTripadvisor ngo-2018.
Indawo efanelekileyo yokuya kwiintsapho, apho ukonwabela imozulu entle yeMeditera. Ifakwe kwindawo yokuhlala ezolileyo ePlayas de Muro, imiz nje emi-4. elwandle.
Indlu inamagumbi okulala ama-3; Iibhedi ezi-2 eziphindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 zomntu omnye, igumbi lokuhlala eliphangaleleyo, ikhitshi kunye namagumbi okuhlambela amabini, kunye nokurhangqwa ngamathafa amakhulu kunye negadi, nto leyo eyenza i-350m2 iyonke.
Kumgangatho ophantsi sifumana igumbi lokuhlala elinomabonakude wesathelayithi, igumbi lokutyela elinomthamo wabantu ukuya kuthi ga kwi-8, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokulala eli-1 (libandakanya amashiti nemiqamelo), kunye negumbi lokuhlambela eli-1 apho uya kuba neetawuli, isepha kunye neshampu.
Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokulala elinokufikelela kwi-terrace yabucala, elinye igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Ukuba ndiyifeze, yona villa singqongwe masimu apho chitha kwemini eqaqambileyo elangeni okanye emthunzini, abaqhagamshelwe ngqo emyezweni, leyo isiphango ukususa esantini ukusuka elunxwemeni lula. Phambi kokuba bangene indlu . Ekugqibeleni, inegumbi elincinci lokuhlamba impahla, apho uya kufumana umatshini wokuhlamba onawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Aina
Nayiphi na imibuzo okanye iimfuno, siya kuba nakho konke onakho.
Inombolo yomthetho: Reg.Gral.Entrada L12E928
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Muro